မိခင်နို့တိုက်ကျွေး - မျှသို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့? ကြှနျတေျာ့ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးကဘာလဲ
နို့တိုက် | ကလေး
ငါသည်ငါ့ကလေးနို့တိုက်ကျွေးသင့်သလော အများအပြားမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအားဖြင့်မေးလျှင်တစ်ဦးကမေးခှနျးက။ သို့သော်အချို့ပြုလုပ်ရန်မ brainer ရဲ့, ဒါပေမယ့်မရအခြားသူတွေ။ အတော်များများရှိမရှိနှင့်မည်သို့သူတို့ "ညာဘက်" သို့မဟုတ်သူတို့ဘာတွေနို့သည့်အခါကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်လုပ်တွေးမိ။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေး - ခံစားချက်တဲ့ကိစ္စ
သို့သော်မိခင်နှင့်သားဖွားဆရာမများ၏အတွေ့အကြုံကိုနို့တိုက်နှင့်ပတ်သက်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ပင်အစီအစဉ်များကိုခဲသဘောမျိုးလုပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ တလက်ပေါ်, သိကျွမ်းခြင်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်ပေမယ့်ကလေးက၏အခြားဘက်ခြမ်းလို့ပဲ။
ထို့စကားလုံးတစ်လုံးလို့ပြောခဲ့ပါသည်။ မိမိအဦးစားပေး, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၏ခံစားချက်များကို, ဒါပေမယ့်လည်းရငျးနှီးမှုနှင့်လုံခြုံရေးတို့အတွက်ဆန္ဒနို့တိုက်၏အချိန်ကိုက်နှင့်စည်းချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငယ်မွကွေီးနို့တိုက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
mom, ကိုးစားခဲ့လျှင်သူမ၏ကလေးသည်အမှန်တကယ်ကနဦးအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်အချို့သောဇွဲဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ အလားတူသငျသညျနို့တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှည်လျား၏မေးခွန်းကိုသက်ဆိုင်သည်။ နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမစိုးမိုးရေးမရှိ, စည်းမျဉ်းလည်းမရှိ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးမိခင်နှင့်ကလေးများကဲ့သို့ရှိသကဲ့သို့, အဆင်ပြေပါသည်။
တစ်ဘက်မှာလိုအပ်ကြောင်း, များသောအားဖြင့်အခြားဘက်ခြမ်းကိုလည်းရပ်တန့်ဖို့အချိန်ကြောင်းခံစားမှုနှင့်အတူအလိုလိုဓာတ်ပြုပြီးပါဘူး။ မိခင်နှင့်ကလေးများအကြားဆက်သွယ်ရေးဟုတ်ကဲ့ပင်ကိုယ်နှင့်ခံစားချက်များကိုအပေါ်နီးပါးလုံးဝပြေး, ဒီနို့တိုက်နှင့်မကွဲပြားခြားနားသည်။
အဆိုပါအာဟာရဘက်မှဒါ့အပြင်နို့စဉ်းစားရင်သားနို့မညီမျှသောအစားထိုးရှိကွောငျးအလေးပေးဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ကမ်းလှမ်းအစားထိုးရောနှောနွားမရဲ့နို့, ပဲပုပ်သို့မဟုတ်မြင်းရဲ့နို့နှင့်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိတူတဲ့လူ့နို့အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်။
သာသည်ဤအထူးသဖြင့်မိမိအအသိုက်ကာကွယ်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်း, ငယ်သောသူကိုလိုအပျကွောငျးအရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတ္ထုများပါရှိသည်။ ဤရွေ့ကား, ထို colostrum အတွက်အဓိကအားဖြင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌ဖြန့်ချိကြောင်းဒါခေါ် Pre-နို့ပါရှိသောနေကြသည်။ ထိုအခါကအမှန်တကယ်မိခင်နို့၏ဖွဲ့စည်းခြင်းထံသို့မရောက်ရ။
ဤတွင်ဖွဲ့စည်းမှုအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မိခင်နို့ဖို့ပထမဦးဆုံးနို့ကနေလမ်းတွင်ပရိုတိန်းပါဝင်မှု, ဆီဥနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကြောင်းအရာတိုးလျော့နည်းစေပါသည်။ ထုတ်လုပ်ပမာဏကိုအချိုးဝယ်လိုအားပေါ်တွင်မူတည်သည် - ကမ်းလှမ်းမှုကို မှစ. , ဝယ်လိုအားလည်းအတက်အကျနိုင်ပါတယ်။ နွားမရဲ့နို့တွေနဲ့မိခင်နို့၏နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤတွင်နောက်တဖန်အရေးကြီးဆုံးကိန်းဂဏန်းများ:
(က G / 100g)
စားပွဲရုံသာလူ့နို့ကလေးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုက်ညီကြောင်းပြသထားတယ်။ နွားမရဲ့နို့ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောတစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးများလွန်းပရိုတိန်းသို့မဟုတ်ကြီးမားလွန်းပရိုတိန်းမော်လီကျူးများအတွက်ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, နွားမရဲ့နို့ပထမနှစ်တွင်၌ပေးသောမရသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီပါဝင်မှု, သို့သော်လည်းနိမ့်သည်။
မိခင်နှင့်ကလေးများအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုး: နို့အစားအစာပြဿနာအပြင်သို့သော်အခြားအရေးကြီးသောတာဝန်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်ကမိခင်တွေလည်းများမှပူနွေးလာမှုကာကွယ်မှုမရှိဘဲသူငယ်တော်ကိုအသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်၌မိမိတို့လမ်းဝမ်းကိုရှာဖွေလျှင်သာ, ရကိုယ်တိုင်က "သိ" နှင့်နေဆဲလုံခြုံရေးအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါအစအဦး၌။ ရုံထို့နောက်နို့တိုက်သည်ဤရှုထောင့်မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်သောမိခင်နှင့်ကလေးကြားရှိရငျးနှီး, မတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလည်းအခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူအစားထိုးရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေး, နွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်အများကြီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရေးကြီးတယ်။
တီဗီသို့မဟုတ်ရေဒီယိုအဘယ်သူမျှမလမ်းကို run သင့်ပါတယ်, ဖုန်းပိတ်ထားရပါမည်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအိမ်မှုဝေယျာလွှဲအပ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးရငျးနှီးမှုကိုခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင်သင်တန်း၏နို့တိုက်လည်းအချို့သောလက်တွေ့ကျတဲ့ရှုထောင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလတ်ဆတ်ပိုး-အခမဲ့ လုပ်. , အမြဲနှင့်နေရာတိုင်းလက်ျာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အပူချိန်ညာဘက်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ပုလင်း, ပုလင်းပူနွေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းယူမထားပါနဲ့။ ဤသည်ကိုလည်းမိခင်ကပိုမိုဘိုင်းနှင့်လျော့နည်း overhead ခွင့်ပြုပါတယ်။
နို့တိုက်သစ်တစ်ခုနည်းနည်းယောက်ျားသည်အသက်တာ၌အကောင်းဆုံးစတင်ကြောင်းဒါကြောင့်အားလုံးအားလုံးအတွက်သဘောသဘာဝရဲ့ဉာဏျပညာကို set up သိရသည်။ အာဟာရ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး။ သင်တန်း၏, နို့တိုက်ကျွေးသို့မဟုတ်မလိုချင်နိုင်သူအမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ဆန့်ကျင်မည်သည့်အကျပ်ကိုင်စေမပြုလုပ်သင့်သောကွောငျ့တောင်မှအဆုံးစွန်သော, ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးကျေးဇူးမရှိကိုပြု၏။ သို့သော်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒနှင့်နို့တိုက်ကျွေးနိုင်စွမ်းလည်းမရှိ, ဒီသို့သော်မည်သည့်တုဖြေရှင်းချက်မှပိုမိုနှစ်သက်ရပါမည်။
သငျသညျမြင်ပြီလော အခမဲ့ စားသောက်န်းကျင်ကလေးတွေအဘို့အ Coloring စာမကျြနှာ!
မိခင်နို့တိုက်ကျွေး - သညျဘိုးဘေးတို့ပါဝင်သည်
လူကြိုက်အများဆုံး: ကလေးများအကြောင်းကို quotes | StadtLandFluss play & တင်းပလိတ်များ | ဂျာမဏီ 16 ပြည်နယ်များ | ယူအက်စ်အေစတိတ် | အတူတူ Showering | ခေါ်ဆောင်သွားကဗျာ | နို့တိုက်ကလေး | ကြောကျထိုး | ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ပဟေဠိ | | သစ်ခွစောင့်ရှောက်မှု | မီးပုံ | နေကြတ် | သားသမီးရဲ့ကိစ္စများ | ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဗျာတစ်ပုဒ် | ကလေးများအကြောင်းကိုကဗျာ | ရယ်စရာစကား | ရသေံ | မိသားစုသစ်ပင် | ကမ္ဘာ၏မြေပုံ | Mandalas လူကြီးများ |